အိပ်မက်ဆိပ်ကမ်း: ဘ၀ လှေကား
လူမှုရေး နယ်ပယ်၊ ပညာရေး နယ်ပယ်၊ စီးပွားရေး နယ်ပယ်၊ ဆောက်လုပ်ရေး နယ်ပယ် စသည့် နယ်ပယ် အသီးသီးတွင် ထို စကားလုံးလေးသည် အရေးပါ လှသည်။ လှေကား ဟု ဆိုလိုက်သည်နှင့် အထက်ကို တက်သော၊ အောက်ကိုဆင်းသော အဆင့် (Step) လေးများနှင့် နေရာတစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ အကူးအပြောင်း လုပ်ပေးသော အရာတစ်ခုအဖြစ် အားလုံး မြင်ယောင်မိကြမည်။
ကဗျာလေးတစ်ပုဒ် ရေးဖူးပါသည်။ “ခေတ်သစ် ကျောက်တုံးများ” ဟု အမည်ပေးခဲ့ဖူးသည်။
ကျွန်တော်တို့ နေရာတစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ သွားသည့်အခါ ပေးဆပ်လိုက်ရသည့် အရင်းအနှီးများကတော့ ကွာခြားသွားမည် ထင်ပါသည်။ ဦးနှောက် အရင်းအနှီး၊ ပညာ အရင်းအနှီး၊ အချိန် အရင်းအနှီး၊ လုပ်အား အရင်းအနှီး အပြင် လိုအပ်လျှင် နှလုံးသား အရင်းအနှီးနှင့် စိတ်ဓါတ်တစ်ချို့ပါ ရင်းနှီးမြုပ်နှံလိုက်ရသည်။ တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် အကူးအပြောင်းမှာ တစ်ချို့တွေကလည်း အမှန်အကန်၊ တစ်ချို့တွေကလည်း အကြံအဖန်နှင့် တက်ကြသည်၊ ဆင်းကြသည်၊ သွားကြသည်၊ လာကြသည်။ ကိုယ်စီ သတ်မှတ်ထားသော လှေကားများနှင့် စံနှုန်းများသည် အများသားပင် မဟုတ်ပါလား။ သေချာသည်မှာ ထို လှေကားများကို နေ့စဉ် ထိတွေ့နေရခြင်းပင်။
ဆောက်လုပ်ရေး နယ်ပယ်မှ လှေကားလေးများသည်တော့ ကျွန်တော်နှင့် အရင်းအနှီးဆုံးဖြစ်မည်။ တစ်ပြေးညီ လှေကား (Straight Flight)၊ တစ်ဆစ်ချိုး လှေကား၊ နှစ်ဆစ်ချိုး လှေကား၊ သမင်လည်ပြန် လှေကား (Open Newel & closed Newel Stair)၊ ခိုနန်းကြိုး လှေကား (Quarter Landing Stair) ၊ ကြောင်လိမ် လှေကား (Spiral Stair)၊ ခရုပတ် လှေကား၊ ခိုနန်းကြိုး နှစ်ဖက်ခွဲ လှေကား (Bifurcated Stair)၊ ခရုပတ် လှေကား (Geometrical Stair or Open Well Quarter Landing Stair)၊ အရေးပေါ် လှေကား (Fire Escape Stair) တွေအပြင် Escalators (စက်လှေကားများ)၊ Ladder (လှေကား အရှင်များ)၊ Elevators (ဓါတ်လှေကားများ)၊ Stairlift (မသန်မစွမ်းများအတွက် အထူး လှေကားများ) နှင့် Moving Sidewalks (ရွှေ့လျား လျှောက်လမ်းနှင့် လှေကားများ) စသည်ဖြင့် လှေကားလေးများ စုံလင်လှသည်။ လူမှုရေး နယ်ပယ်တွင် အသုံးပြုသည့် လှေကားလေးများသည် သူ့နှုန်းနှင့် သူ့စံ အကန့်အသတ် မရှိပေမယ့် ဆောက်လုပ်ရေး နယ်ပယ်တွင်တော့ အကန့်အသတ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ များလွန်းလှသည်။
ရှေးယခင်က မြန်မာ့ရိုးရာ လက်သမား ပညာရပ်တွင် လှေကား ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် လှေကားတင်ခြင်းသည် အကြီးအကျယ် ၀ိတ္တရချဲ့ခဲ့သော တခမ်းတနား အလုပ်များ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယနေ့ တိုးတက်လာသော နည်းပညာများအောက်တွင် လှေကား ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် လှေကားတင်ခြင်းသည် စာမဖွဲ့လောက်သော ပညာရပ်များ ဖြစ်လာသော်လည်း လှေကားနှင့် ပတ်သက်သော အယူအဆများနှင့် ရိုးရာယုံကြည်မှုများက နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ကျန်ရစ်နေသေးသည်။ “လှေကားထစ်ရေအား စုံ ဂဏန်းဖြင့် မလုပ်ကောင်း၊ မ ဂဏန်းဖြင့်သာ လုပ်ကောင်းသည်” ဟုသော အတွေးအခေါ်များလည်း ရှိသည်။ ၄င်းသည် ယုံကြည်မှုတစ်ခုအပေါ် အစွဲပြုသည်လား၊ အခြားအကြောင်းရင်းများ ရှိသည်လား မရောရာလှချေ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတွင် YCDC မှ “လှေကားတစ်စင်း၏ တဖြောင့်တည်း တက်ရမည့် အပိုင်းတစ်ပိုင်းတွင် ထစ်ရေ (၁၃) ထစ်ထက် မပိုရ” ဟု ပြဌာန်းထားသည်။ နှလုံးအားနည်းသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ကြံခိုင်မှုကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းဖြင့် ညွှန်းသော ပြဌာန်းချက် ဖြစ်ပေမည်။
အခြား မြန်မာ့ဓလေ့ ထုံးတမ်းအယူအဆ တစ်ခုမှာ လှေကားတပ်ဆင်ရာတွင် လှေကားထိပ်နှင့် ခင်းထားသည့် သစ်သားကြမ်းပြင်တို့သည် ဒေါင်လိုက် တွေ့ဆုံရမည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် လှေကားအပြေး (Flight) သည် အောက်ခံ သစ်သားဆင့်များနှင့် မျဉ်းပြိုင်ဖြစ်ရပြီး သစ်သားကြမ်းခင်းကို ထောင့်မှန်ဖြစ်ရမည် ဟု ဆိုခဲ့ကြသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် “ကြမ်းဦးတိုက်ခြင်း” မဖြစ်စေရ ဟု ကန့်သတ်သည်။ ထို့အတွက် လှေကားအပြေးများကို အိမ်အတွင်း layout ချရာတွင် လှေကားထားရမည့် အရပ်မျက်နှာအပြင် ကြမ်းခင်းနှင့် ဆင့်တန်းတို့နှင့်လည်း ဆက်စပ် စဉ်းစားပေးရလေသည်။ ကြမ်းကို ချောမွတ်အောင် ရွေဘော်ထိုးပြီးနောက် အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ကြမ်း၏ လားရာ direction အတိုင်း လှေကား လှေကားထိပ်အတွင်းမှ အောက်သို့ မပြုတ်ကျစေရန် ကန့်သတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်မည်ဟု နားလည်မိသည်။ ယနေ့ အသုံးပြုများလာသော ကွန်ကရစ် လှေကားများ၊ သတ္တုလှေကားများတွင်တော့ ထို အချက်သည် မလိုအပ်တော့ချေ။ သို့ပေမယ့် သစ်သားလှေကားများ၊ ပါကေးခင်းမည့် ကြမ်းခင်းများနှင့် ဆောက်လုပ်မည့် အိမ်များအတွက်တော့ လိုက်နာသင့်သော အယူအဆ တစ်ခု ဖြစ်ပေမည်။
အခြား လှေကားနှင့် ပတ်သက်သော မြန်မာ့ဓလေ့ ထုံးတမ်းအယူအဆ တစ်ခုမှာ လှေကားပြုလုပ်ရာတွင် လှေကားထစ် အရေအတွက်ကို “ရာဇ၊ မရဏ၊ လာဘ” ဟူ၍ အစဉ်အလိုက် မှတ်သွားရာ “မရဏ” ကျမည့် လှေကားထစ်ကို ရှောင်ကျဉ်ကြရသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ၂၊ ၅၊ ၈၊ ၁၁၊ ၁၃ စသည့် အထစ်ရေဖြင့် ဆုံးမည့် လှေကားများကို ရှောင်ကျဉ်စေလိုသည်။ ထိုအတွက်မူ ခိုင်လုံ ပြည့်စုံသော အကြောင်းပြချက်ကို (ကျွန်တော့်အနေဖြင့်) ယနေ့တိုင် မစဉ်းစားနိုင်။ သို့ပေမယ့် အယူရှိသော လုပ်ငန်းရှင်၊ အိမ်ရှင်များအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သော အချက်တစ်ချက်အဖြစ် မှတ်သားထားမိသည်။
ရိုးရာ အယူအဆတစ်ချို့သည် ကုံလုံသော အကြောင်းပြချက် ရှိကောင်းရှိမည်။ ယုံကြည်မှု ဓလေ့တစ်ခုသာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ ချင့်ချိန်၍ ယုံကြည်လိုက်နာရန်တော့ လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ဖက်တွင် သိပ္ပံပညာ အသိအမြင်အပေါ် အခြေတည်၍ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုတော့ စနစ်တကျ လိုက်နာတတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့မှသာ အန္တရာယ် ကင်းသော၊ သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်သော ဟင်းလင်းခွင် (Space) တစ်ခုအတွင်း နေထိုင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
လှေကားတစ်ခုကို ဖန်တီးသည့်အခါ အရေးအကြီးဆုံးမှာ လှေကားခြေကျော် (Rise, R) နှင့် လှေကားခြေနင်း (Tread, T) တို့၏ အတိုင်းအတာနှင့် လှေကား ဆင်ခြေလျှော အစောင်း ဖြစ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် လှေကားအစောင်းအား ၄၅ ဒီဂရီထက် ပို၍ မတ်စောက်ခြင်း မပြုမိအောင် ဂရုစိုက်ရသည်။ ၂၅ ဒီဂရီထက် နည်းပါကလည်း လှေကားထစ်များ ပြေပြစ်လွန်း၍ လှေကားအတွက် နေရာများများစွာ ပေးရလေသည်။ လူတစ်ဦး၏ ခြေဖ၀ါးတစ်ချပ်စာသည် ပျှမ်းမျှအားဖြင့် (၉) လက်မခန့် ရှိသဖြင့် လှေကားခြေနင်းများအား အနည်းဆုံး (၉) လက်မ ထားရှိလေ့ ရှိကြသည်။ လှေကားခြေကျော်အတွက်မူ အများဆုံး (၇) လက်မ မှ ( ၈) လက်မ အထိ ထားလေ့ ရှိကြသည်။ လွယ်ကူစွာ နားလည်အသုံးပြုနိုင်သော သီအိုရီ တစ်ခုမှာ [ 2R + T = 25 inch ] ဖြစ်လေသည်။ အခြား လှေကားအကျယ်များ၊ လှေကားလက်ရန်းတိုင် အမြင့်များအတွက် ကန့်သတ်ချက်များ များစွာ ရှိသေးသည်။ ထိုအချက်များသည် လက်တွေ့ နေထိုင်မှုအတွက် ပိုမိုအဆင်ပြေ အန္တရာယ်ကင်းစေရန် လေ့လာ ချမှတ်ထားသောအချက်များ ဖြစ်သည့်အတွက် သိထားသင့်လေသည်။
ခြေကျော် ခြေနင်းများ၏ အတိုင်းအတာသည် အခြေအနေ အချိန်အခါအလိုက်၊ နေရာဒေသအလိုက် မတူညီနိုင်ချေ။ သို့ပေမယ့် အဆောက်အအုံတစ်ခုအတွင်း တဖြောင့်တည်း သွားနေသော လှေကားပြေးတစ်လျှောက်တွင် တစ်သတ်မတ်တည်းသော အတိုင်းအတာဖြင့် (uniform) သွားနိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်ပေသည်။ တစ်မူး တစ်ပဲများသော အတိုင်းအတာလေးသည် လိုတိုး ပိုလျော့ ဖြစ်လာလျှင် (လှေကား ခြေကျော် အကွာအဝေးများ မတူညီလာလျှင်) အသုံးပြုသူမှာ အန္တရာယ် မတော်တဆမှုများ ဖြစ်ရန် ပိုမို နီးစပ်လာတတ်သည်။ “ရာဇ၊ မရဏ၊ လာဘ” တို့သည်လည်း ရိုးရာ ယုံကြည်မှုအရ အရေးကြီးကောင်း အရေးကြီးပါမည်။ “စုံ ဂဏန်း၊ မ ဂဏန်း” တို့သည်လည်း ရိုးရာ ယုံကြည်မှုအရ အရေးကြီးကောင်း အရေးကြီးပါမည်။ လက်တွေ့ကျကျ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ အသုံးပြုသူအတွက် စိတ်ချရသော၊ အဆင်ပြေ ချောမွေ့သော လမ်းလေးတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ လှေကားလေးများကို ဖန်တီးခွင့်ရလျှင် နေထိုင်မည့်သူများအတွက် သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေချင်သည်။ လိုအပ်သော အလင်းများနှင့် လေ၀င်လေထွက်များ အပြည့်အ၀ ရစေလိုသည်။ အဆောက်အဦးတစ်ခုလုံး အတွက် လိုအပ်သော ဆောင်တာ (function) များကို အပြည့်အ၀ ပံ့ပိုးပေးနိုင်တော့ ကြားခံ အကူးအပြောင်းလေးတစ်ခု ဖြစ်စေလိုသည်။ အသုံးပြုစဉ်မှာ စိတ်လုံခြုံမှု အပြည့်အ၀ ပေးနိုင်သော တံတားလေးတစ်ခု ဖြစ်စေလိုသည်။ ကျန်းမာသန်စွမ်းသော သာမန်လူသားများအတွက်သာမဟုတ်ပဲ မသန်မစွမ်း၊ အကူအညီ လိုအပ်သောသူများအတွက်ပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးလိုသည်။ Private Home များထက် Public Area များတွင် အသုံးပြုသည့် လှေကားလေးများ၊ လျှောက်လှမ်းလေးများတွင် disabled people များအတွက် ယခုထက် ပို၍များ စဉ်းစားပေးခဲ့လိုသည်။ နိုင်ငံတော် Project များ၊ Public Building များနှင့် Commercial Area များမှာ စနစ်တကျ ကျင့်သုံးလာလျှင်ဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်သည် ပို၍ ချိုမြနွေးထွေးသော ရပ်ဝန်းလေးတစ်ခုများ ဖြစ်လာလေမည်လား။
လှေကားလေးများသည် နေရာတစ်ခုမှ အခြားနေရာတစ်ခုသို့ သွားစဉ် အသုံးပြုသည့် လမ်းကလေးတစ်ခု ဖြစ်သည်။ စံချိန် စံနှုန်းများလည်း ရှိသည်။ အယူအဆ သဘောတရာများလည်း ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ မည်သည့် လှေကားများကို အသုံးပြုမည်၊ မည်သည့် ခရီးကို သွားမည်၊ မည်သို့ သွားမည် စသည်တို့သည် ကျွန်တော်တို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက် အောက်တွင်သာ တည်ရှိနေပါသည်။ နေထိုင်ရေးအတွက် လှေကားလေးများ၊ ဘ၀အတွက် လှေကားလေးများ။ လှေကားလေးများကတော့ဖြင့် ကျွန်တော်တို့ အမြဲ ထိတွေ့နေရပေဦးမည်၊ ဖြတ်သန်းနေရပေဦးမည်။
ရှင်းသန့်သော စိတ်နှင့် ဖြတ်ခွင့်ရပါစေဟုသာ ဆန္ဒပြုမိသည်။
လှေကား ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသော တရုတ်ရိုးရာ ဖုန်းရွှေ ပညာရပ်အချို့ကို မှတ်စုတစ်ချို့အဖြစ် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ အချို့ အချက်များသည် ဖုန်းရွှေနည်းဖြင့် ဆိုခြင်းထက် အဆင်ပြေ ချောမွေ့သော ဟင်းလင်းခွင်တစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီးရာတွင် အရေးပါသော အချက်များ ဖြစ်သောကြောင့် လေ့လာလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ အခြားစာအုပ်ကတော့ Kelsey Kruse, AIA ၏ Interior Graphic Standards ကိုပဲ လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်အတွက် ဆက်လက်လေ့လာရပေဦးမည်။ မန္တလေး နန်းမြို့အတွင်းရှိ စွယ်တော်စင် အဆောက်အအုံတွင် တပ်ဆင်ထားသော ဆတ္တဒါန် လှေကား (သင်္ကေတဖော် လှေကား) အကြောင်းလည်း သိလိုပြန်သေးသည်။ နောက်ဆုံး လှေကားတွေအကြောင်း ပထမဦးဆုံး သင်ပေးခဲ့တဲ့ ဖေဖေကို သတိရမိသလို လက်တလော ကုသိုလ်ပြုမိသည့် အလုပ်တစ်ခုအတွင်း လိုအပ်သည့် staircase တွေကို အသေးစိတ် စဉ်းစားဖို့ အကြောင်းဖန်လာသည့် ကံ ကို ကျေးဇူးတင်မိသည်။
မန္တလေး နန်းမြို့အတွင်းရှိ စွယ်တော်စင် အဆောက်အအုံတွင် တပ်ဆင်ထားသော
ဆတ္တဒါန် လှေကား (သင်္ကေတဖော် လှေကား)
Stairway များနှင့် Feng Shui
The position of the stairways and the type of stairways is also important according to Feng Shui. A stairway that is placed in the wrong place can deflect Chi in the wrong direction. If there isastairway right opposite the front door, then on entering the house Chi will rush through and upstairs and the ground floor will be starved for Chi. Using mirrors, wind chimes, potted plants and screens on the stairs will slow down the rushing Chi.
If your stairway has risers instead of steps, it will hinder the flow of Chi to the second floor. Placing plants underneath the stairs will deflect Chi to the second floor allowing the energy to flow continuously. Makingaskylight above the stairs will also improve the situation. Curved stairways are best, if you havealanding half way along the staircase it will help to calm the Chi as it rises and falls. If your stairway has sharp bends use mirrors, plants or wind chimes to remedy the situation. You can placeaheavy statue on the floor at the base of the stairs to stabilize the situation. A spiral stairway is not good as it confuses the Chi as it moves along the staircase. Too many stairs will cause the Chi to fluctuate. According to traditional Feng Shui the number of stairs onastairway should be an odd number. Stairs should be solid and there should be no opening at the back of each stair as it allows Chi to escape and it will not move to the second floor.
Stairs should be kept clean and should be well lit. As Chi gains speed as it moves overastaircase it is advisable to sleep near the top or bottom of the staircase. A bedroom should not face the staircase and should not be located too close to it. Do not clutter the space under the staircase. Arrange things in an orderly fashion or installacupboard so that you can keep things tidily in it. Staircase running through the center of the house will cause conflict in the family.
ဗိသုကာ အနုပညာ အတွေးအမြင်နှင့် ဗိသုကာ အဆောက်အအုံပညာ စာစုများ (ဒေါက်တာလွင်အောင်)
အဆောက်အအုံ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာ လက်စွဲ ( ဦးကျော်နိုင်)
http://en.wikipedia.org/wiki/Stairway & Feng Shui.
၀ိုး...လှေကားတွေအကြောင်း တကယ်စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်...သိချင်တာတွေရော သိသင့်တာတွေရော တစ်ထိုင်တည်းနဲပ တော်တော်များများသိသွားရလို့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပါရစေ...
ပုံလေးတွေရော.. စာလေးတွေရော ဖတ်လို့ကောင်းတယ်.. အမှန်အတိုင်းပြောရရင် လှေကားအကြောင်း အဲလောက် အသေးစိတ် မသိခဲ့ဖူး.. ပို့စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ
သင်္ကေတ၀ါဒမှ မြတ်သော လှေကားမျိုး (ဒေါက်တာလွင်အောင်၏ အဆောက်အအုံနှင့် လှေကား ဆောင်းပါးမှ)
အရှေ့အာရှနိုင်ငံများ လှေကားထားသိုခြင်းအတွက် အနက်အဓိပ္ပါယ် ဖော်ဆောင်ခြင်းတို့ ရှိပေသေးသည်။ ထူပါစေတီတောင်တို့တွင် နတ်မုခ်လှေကားများ၊ နန်းတော်အိမ်တို့တွင် ဆောင်တော်ဦး သင်္ကေတဖော် လှေကားများဟူ၍ အမျိုးမျိုး ရှိခဲ့ပေသည်။ နန်းတော်ဝင်း၏ အရှေ့တံခါး မြောက်ဘက်တွင် ဆောက်ထားတတ်သော “စွယ်တော်စင်” ဟုခေါ်သည့် သုံးထပ်မျှ မြင့်သော အုတ်တိုင် အဆောက်အအုံ၏ လှေကားကို "ဆတ္တဒါန်လှေကား" (၀ါ) "သတ္တဒါန်လှေကား"ဟူ၍ ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။
"ဆတ္တဒါန်” ဟူသည် “ရောင်ခြည် ခြောက်သွယ်ရှိသော” ဟူသည့် အနက်ရှိ၏။ အဓိပ္ပါယ်မှာ ကောင်းကင်ဘုံနှင့် (မြေပြင်ရှိ) လူ့ဘုံတို့ကို ဆက်သွယ်ပေးသော လှေကားနှင့် သဏ္ဌာန်တူသည့်အရာမှာ “သက်တန့်ရောင်ခြည် မျဉ်းကွေးကြီး” ဖြစ်ပေသည်။ ဤသည်ကို ရည်ရွယ်၍ "စွယ်တော်စင်"ရှိလှေကားကို "ဆတ္တဒါန်"ဟူ၍ ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ စွယ်တော်စင်ဟူသည်မှာ မင်း၊ မင်းညီမင်းသားတို့တွင် ကြီးမားသော နိုင်ငံ့တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရန် တာဝန်ယူရသည့်အခါ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုခြင်းနှင့် အလားတူသော ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ရကြောင်း သိရပါသည်။
ကောင်းကင်ဘုံမှာ ကတိပြုသည့် (၀ါ) သိကြားမင်းထံ သစ္စာတိုင်၍ မိမိ၏ နိုင်ငံတာဝန်ကို ဦးလည်မသုန် ရွက်ဆောင်ပါမည်ဆိုသည့် အခမ်းအနားကို ပြုလုပ်ရာတွင် မင်းသားသည် ကောင်းကင်ဘုံသို့ သက်တံ့လှေကားမှ တက်ရောက်သွားပြီး အလေးအနက်ထား၍ တာဝန်ယူခဲ့ကြောင်းကို တိုင်းရင်းသားတို့အား ပြသရမည်မှာ သူ့ခေတ်နှင့် သူ့အခါတွင် အလွန်ပင် ထိရောက်မည့် အပြင်အဆင် အလုပ်အဆောင်ဖြစ်ကြောင်း သိအပ်ပေသည်။